प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंगको विशेष अन्तर्वार्ता - BBC News नेपाली
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंगको विशेष अन्तर्वार्ता
9 फेब्रुअरी 2011
सात महिनाको अन्योल चिर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल गत साता गणतन्त्र नेपालको चौथो प्रधानमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शपथ लिएपछि बीबीसी नेपाली सेवाका प्रमुख रवीन्द्र मिश्रलाई आफ्नो पहिलो विशेष अन्तर्वार्ता दिएका थिए। अन्तर्वार्ताका प्रमुख अंश:
यसअघि तपाईंकै दलका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उनले गर्न नसकेका कुन काम तपाईंले गर्नुहुन्छ?
कमरेड माधवकुमार नेपाल र म प्रधानमन्त्री भएको परिप्रेक्ष्यमा परिवर्तन भएको छ। वहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीहरु सरकारमा संलग्न थिएनन्। अहिले म प्रधानमन्त्री भएको बेला माओवादीहरु सरकारमा संलग्न हुँदै छन्। माओवादीको सरकारमा संलग्नताले फरक के पार्न सक्छ भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा तीव्रता आउन सक्छ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादीहरु सरकारमा थिएनन्। त्यसैले भनियो शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अब तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा नहुने स्थिति देखिइसकियो। तपाईंनै भन्नुहुन्थ्यो सहमति नभई हुँदैन भनेर, अब अघि बढ्ने कसरी त?
राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ। सबै सरकारमा बसेर राष्ट्रिय सहमति गर्छौं कि, कोही सरकारमा र कोही प्रतिपक्षमा बसेर सहमति गर्छौं भन्ने भिन्नै कुरा हो। अहिले म प्रधानमन्त्री बनेर जुन सरकार बन्दैछ, यो सरकारपनि राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्ने कुराको थालनी हो भन्ने म ठान्छु।
तपाईंले साह्रै मीठो भाषामा त्यसो त भन्नुभयो, तर प्रचण्डसंग गरेको गोप्य भनिएको सात बुँदे सहमतिमा चाहीं आलोपालो गरेर हामी प्रधानमन्त्री हुने भन्या छ, अब तपाईंको प्रयास सबैलाई मिलाएर लैजाने हुनेछ भनेर कसरी पत्याउने?
त्यो सहमतिभित्र प्रयोग भएका कतिपय भाषाहरुले मानिसहरुलाई विभिन्न किसिमको अर्थ दिने सम्भावनापनि रहन्छ। तर यो सहमति कुनै पार्टिका विरुद्ध होइन। सबै दलहरुलाई एकताबद्ध बनाउने पार्टिको जुन स्थापित नीति हो, हामी त्यही नीतिमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौं। आलोपालो भनेपनि दुईवटाकै बीचको आलोपालो भन्ने अर्थ त्यसबाट निस्कँदैन।
निस्कँदैन र निकाल्नपनि हुँदैन।
म सहमतिको त्यो लाईन पढौं?
हुन्छ, पढ्नुभएपनि हुन्छ।
प्रष्टैसंग के भन्या छ भने आपसी सहमतिको आधारमा भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टिका बीच दिर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइनेछ….
यो आलोपालो भनिरहँदा दुईवटा पार्टिकोमात्रै सरकार बन्ने स्थिति बन्यो अर्को पार्टि आएन भने दुईवटाको बीचमा मात्र हुन सक्ने भो। तर अर्को पार्टिपनि आउन चाह्यो भने उसको निम्तिचाहीं ढोका बन्द भन्ने कुरा यसले गर्दैन
यो आलोपालो भनिरहँदा दुईवटा पार्टीकोमात्रै सरकार बन्ने स्थिति बन्यो अर्को पार्टी आएन भने दुईवटाको बीचमा मात्र हुन सक्ने भो। तर अर्को पार्टीपनि आउन चाह्यो भने उसको निम्तिचाहिं ढोका बन्द भन्ने कुरा यसले गर्दैन।
तपाईंको सरकारलाई र तपाईं र माओवादीबीचको गठबन्धनलाई भारतविरोधी भनेर भनिंदै छ। अनि भारतको समर्थन भएन भने सरकार टिक्दैन भन्ने यहाँ अर्को भनाइ पनि छ। तपाईं आफ्नो सरकार कति लामो समयसम्म टिक्ने अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
म प्रधानमन्त्री भएपछि सबभन्दा पहिलो टेलिफोन कल मैले भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट पाएं। उहाँले हार्दिक बधाइ दिनुभयो।
त्यो त पहिला पहिला पनि हुने गरेकै कुरा हो नि?
उहाँले दुई देशबीचको सरसहयोग बढाउने कुरा गर्नुभएको छ, र भारतको सहयोग मेरो नेतृत्वको सरकारलाई हुनेछ भन्ने कुरा यसै पनि छ।
अनि भारत सरकारबाट पहिलो भारत भ्रमणको निमन्त्रणापनि आएको हो?
निमन्त्रणापनि आएको छ। तर म चाहिं यो देशमा भारत विरोधी अभियानमा कुनैपनि सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिन।
तर जुन दल सबभन्दा बढी त्यो अभियानमा लागेको थियो, त्योसंग गठबन्धन गर्ने आवश्यकता त देख्नुभयो?
हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई दृढतापूर्वक अक्षुण्ण राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ। भारत र चीन हाम्रा अत्यन्त निकट दुईवटा छिमेकी हुन्। यी दुबै निकट छिमेकीहरुसंग सन्तुलित र लाभकारी ढंगको संबन्ध विकास गर्नुपर्दछ।
पहिला कुन देशको भ्रमणमा जानुहुन्छ?
अँ…परिस्थितिले मलाई कस्तो ठाउँमा पुर्‍याउँछ। कुनै अर्कै देशतिरपनि म जान सक्छु। मेरो अहिलेसम्मको सूचनाले मलाई के वाध्य गर्न सक्छ भने मेरो पहिलो भ्रमण कम्बोडियामा हुन सक्छ।
Image caption प्रधानमन्त्री खनालले शपथ लिएपछि बीबीसीलाई अन्तर्वार्ता दिएका थिए
कम्बोडियापनि लामो समयदेखि द्वन्द्वग्रस्त मुलुक हो। त्यो द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अहिले द्वन्द्वहरुको समाधान गरेर, रुपान्तरण गरेर विकास निर्माणको नयाँ उचाईमा आएको छ। अहिले त्यो मुलुक निकै तीव्र गतिले विकसित हुँदै गइरहेको छ, त्यो मुलुक हेर्नेपनि मन छ। अनि त्यो मुलुकमा आइक्यापले द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे एउटा कार्यक्रम गर्दैछ। त्यसमा मलाई निम्तोपनि गरेको छ। त्यसो हुनाले सम्भवत: मैले भ्याएँ भने त्यो निम्तोमा जाँदा मेरो पहिलो भ्रमण कम्बोडिया हुन सक्छ।
माओवादीले कहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा तपाईंको समर्थन गर्ने र तपाईंले कहिले फेरि एमालेको समर्थन माओवादीलाई दिएर उसलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा समर्थन गर्ने सहमति भएको छ?
अहिले हाम्रोबीचमा त्यससम्बन्धी केहीपनि सहमति भएको छैन। हामीले सामान्य आलोपालोको सिद्धान्त स्वीकारेका छौं। अरु पार्टीपनि सामेल हुने स्थिति बन्यो भने त्यो सहमतिले अलि बेग्लै रुप लिनेछ।
अबको जेठ १४ भित्र त संविधान बन्दैन होला। संविधान बनेन भने के गर्ने योजना छ?
हामी जेठ १४ भित्र संविधान बन्दैन भन्ने कल्पना गरिरहेका छैनौं।
त्यो भन्न हुँदैन भनेर पो नभन्या होला नि। नत्र त वास्तविकता त्यही होला नि?
संविधान बनाउने प्रक्रिया अहिले जुन ठाउँमा पुगेको छ, हामीले बाँकी रहेको समय राम्ररी सदुपयोग गर्ने हो भने संविधान बन्न सक्छ। किनभने ११ वटा विषयगत समितिहरुले जुन अवधारणापत्रहरु प्रस्तुत गरेका थिए, तिनमा गम्भीर मतभिन्नताहरु थिए। करीब २१० वटा विवादहरु मध्ये १३० भन्दा बढीको हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौं।
दुई तिहाइ नभईकन संविधानका धाराहरु पारितै हुँदैनन्। सरकारै दुई तिहाइको समर्थनमा बन्ने अवस्था छैन भने भोलि संविधान कसरी बन्ला?
मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै जाने क्रममा दुई तिहाईभन्दा बढिको समर्थन पनि पाउन सकिन्छ।
जेठ १४ मा संविधान बनेन भने संविधानसभाको म्याद फेरि थप्नेबारे तपाईं र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ?
हाम्रो बीचमा यस सम्बन्धमा केहीपनि कुराकानी भएको छैन।
अहिले हामी जुन ऐतिहासिक घडीबाट गुज्रिरहेका छौं, यतिबेला नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुमाझ चाहे तपाईं लोकतान्त्रिक मोर्चाका नाममा भन्नुस्, चाहे तपाईं वामपन्थी र गैरवामपन्थी मोर्चाका नाममा भन्नुस्, कुनैपनि प्रकारको ध्रुवीकरण गर्न खोज्नुभए त्यो राष्ट्रको हितमा छैन
अहिले वाम ध्रुवीकरणको बारे बाहिर निकै कुराहरु उठेका छन्। एमाले र माओवादीकाबीचमा साँच्चिकै एकीकरण हुने सम्भावना छ कि छैन?
अहिले हामी जुन ऐतिहासिक घडिबाट गुज्रिरहेका छौं, यतिबेला नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरुमाझ चाहे तपाईं लोकतान्त्रिक मोर्चाका नाममा भन्नुस्, चाहे तपाईं वामपन्थी र गैरवामपन्थी मोर्चाका नाममा भन्नुस्, कुनैपनि प्रकारको ध्रुवीकरण गर्न खोज्नुभए त्यो राष्ट्रको हितमा छैन।
तपाईंको सरकारको सबभन्दा पहिलो तीनवटा प्राथमिकता के के हुनेछन्?
सबभन्दा पहिलो कुरो शान्ति प्रक्रियालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउनेनै हुनेछ। दोस्रो प्राथमिकतापनि संविधान बनाउने प्रक्रियालाई तीव्रता प्रदान गर्नुनै हुनेछ। तेस्रो प्राथमिकता देशको शासन व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित बनाउने, शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ गर्ने हुनेछ। यदि चौथो प्राथमिकता सोध्नु हुन्छ भने हामीले आर्थिक पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई नयाँ उचाईबाट थाल्ने कुरा हुन्छ।
तपाईंले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सचिवहरुसंग लोडशेडिंग घटाउन अग्रसरता लिनु पर्‍यो भनेको, वन फँडानी र दैनिक समस्याबारे कुरा गरेको टिप्पणीहरु आएका छन्। यी सबै कुराहरुको समाधान गर्न सकिएला?
खासगरी मुलुकको स्थायी प्रशासनयन्त्र सक्रिय रुपले, सबै साधनस्रोत पूर्ण परिचालन गरेर र जनताको सेवानै हाम्रो कर्तव्य र धर्म हो भनेर लाग्ने हो भने यी सबै समस्याहरु घट्दै जान्छन्। मैले प्रधानमन्त्री भएर सबैभन्दा पहिलो फाइल सदर गरेको नै लोडशेडिंग घटाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एउटा वृहद संयन्त्र निर्माण गर्ने ताकि हामीले एउटा वृहद् योजना आयोजन गर्न सकौं।
कसरी सम्भव होला? लोडशेडिंग सबैको चिन्ता र चासोको विषय हो, तर यो यति ठूलो जालो भएको बुझिन्छ कि तपाईंले कसरी त्यसलाई तोडेर सबैले महशुश गर्नेगरी परिवर्तन ल्याउन सक्नुहोला?
हामीले माफियाहरु र अपचलनकारीहरुका तालुमा टेकेर हिंड्ने आँट गर्नुपर्छ। त्यो जालोलाई चिरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ, त्यसको लागि हामीसंग आँट चाहिन्छ। तात्कालीक रुपमा के गर्ने भन्दा सम्भवत: हामीले थर्मल प्लान्टपट्टि जानुपर्ने हुनसक्छ। म विकल्पहरु सोच्दैछु। विशेषज्ञहरुसंग बसेर छलफल गरेर तात्कालिक रुपमा पनि केही उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। कतिपय पत्रपत्रिकाहरुले के पनि लेखेका छन् भने जुन मानिसले केही समय अगाडि तपाईंलाई चड्कन हाने त्यो त आशीर्वाद पो रहेछ। त्यस्तो किसिमको आक्रोश राख्ने सर्वसाधारण नेपालीहरुलाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ?
हामीले दुईवर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण अहिले लम्बिएको छ। यो लम्बिएर जाने कुराले नेपाली जनतालाई निराशपनि बनाएको छ। त्यो निराश बनाउने कुरामा कतिपय जनता राजनीतिक दलहरुप्रति अलि बढि आक्रोशित पनि छन्। तर जुन मान्छेले मलाई झापड हाने तिनले मलाई झापड हानेर आज बालुवाटार ल्याइपुर्‍याइदिएका छन्। त्यसो हुनाले मैले त उनलाई धन्यवाद दिएको छु। (देवीप्रसाद) रेग्मीजीलाई म आव्हान गर्छु, आउनुस् मसंग बसेर कुराकानी गर्नुस्। तपाईंका समस्याहरु समाधान गर्न म सहयोग गर्नेछु।
अन्त्यमा केही छुटेका कुरा छन् वा केही भन्न मन लागेको छ कि?
शान्ति र संविधान आज सिंगो राष्ट्रको मुद्दा हो। हामी सबैले यसलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। तर यो कुनै एउटा वा दुईवटा पार्टिहरुले गरेरमात्र सम्पन्न गर्न सकिन्न। त्यसैले नेपाली कांग्रेस, तराई मधेशका दलहरु र साना पार्टिहरुलाई पनि सहमति पूर्वक अगाडि बढ्न आग्रह गर्छु। वहाँहरु सबैलाई सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भए त्यसको निम्तिपनि प्रयत्न गर्न म हार्दिक आव्हान गर्न चाहन्छु। शान्ति र संविधान बन्छ। संविधान बनेपछिमात्रै हामी वास्तविक रुपमा शक्तिशाली बन्छौं।